Saturday, 04.04.2020, 01:58am (GMT+5.5) Home Contact
देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ?
Tuesday, 09.23.2014, 06:07am
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा दुरुत्साहन दिने कार्यमा रोक लगाएको छ । तर, जनआन्दोलन २०६२।०६३ पछि नेपालमा निषेध गरिएका तिनै कुराहरू बढी भएका छन् ।
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस्
Tuesday, 09.09.2014, 05:36pm
काठमाडौं । आयोजनाले पार्ने असरमाथि विचार नपुर्याउने हो भने माथिल्लो कर्णालीबाट साढे तीन घन्टा मात्रै विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा कैलाली र बर्दियाका ७७ लाख हेक्टर जमिनको सिंचाई प्रभावित हुन्छ । सिंचाई विभागले ती दुई जिल्लाको रानी–जमरा–कुलरिया, राजपुर र सूर्यपटवा तथा अन्य सिंचाइ आयोजना प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन
Tuesday, 09.02.2014, 08:52pm
संविधान जारी गर्ने समय आउन लागिसक्यो तर संविधानसभा अपूर्ण छ । सरकारले मनोनित गर्नुपर्ने २६ सभासदमध्ये शुक्रबार १७ जनाको मनोनयन गर्याे तर त्यसले दलहरूभित्र अर्को रडाको मच्चिएको छ । नेताहरूले एकलौटी ढंगले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ । अब बाँकी ९ जना सभासदको मनोनयन एकीकृत नेकाप माओवादी र मधेशवादी र साना दलहरूको कोटाबाट हुनेछ ।
गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो
Thursday, 08.28.2014, 01:08pm
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाई हो र राष्ट्रिय जनावरको बध गर्नु अपराध हो । जनआन्दोलन २०६२।०६३ को सफलतापश्चात गौबधको शृङ्खलाा बढ्दै गयो । विशेषतः नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा गरिएपछि यो क्रम बढे पनि अन्तरिम संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनाबर मानेपछि यसमा केही कमी आए पनि यस्ता घटना निमिट्यान्न भने भएका छैनन् । गाई मार्नेहरूले यसलाई आफ्नो अधिकार भन्ने गरे पनि संविधानले निषेध गरेको कुरा गर्नु गैरकानुनी हो । राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्नु संविधान विपरीतको काम हो ।
विदेशीले स्वतन्त्र भनिदिंदा हामी मख्ख
Wednesday, 08.20.2014, 01:36pm
सीमा अतिक्रमण, नेपालबाट हुने वस्तु निकासीमा सम्झौता विपरीतको अबरोध, सिमावर्ती क्षेत्रमा बाँधिएका बाँध, असमान जल सम्झौताका साथै राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्को मार नेपालले भोगिरहेको छ । भारतसंगको रहेको परम्परागत सम्बन्धमा भारतको व्यवहारकै कारण नेपाली जनमानसमा भारतप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित भैरहेको छ ।
“संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ”
Wednesday, 08.13.2014, 11:23am
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शस्त्र छाडेर शास्त्रको बाटोमा हिंड्नु ठूलो काम हो भन्दै नेपालले संविधान बनाउँदै गरेको र त्यस्तो संविधान बनाउन अग्रसर भएकाहरुमा ऋषिमन हुनुपर्ने सुझाव दिए । शास्त्र र शस्त्रको भेद जानेका मोदीले संविधान कसैको लहड वा आकांक्षा तृप्त गर्ने ठेली नभएर मुलुक चलाउने शास्त्र नै भएको जिकिर गर्दै आगामी पुस्तालाई समेत काम लाग्ने संविधान दिन सुझाव दिए । उनले संविधानलाई शास्त्रको रुपमा चित्रित गरे ।
विकास गर्न मगन्ते हैन उद्यमी बन्नुपर्छ
Monday, 08.04.2014, 06:52pm
नेपाल अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन भएर पनि गरीब छ । भएको स्रोत साधनको समुचित उपयोग नभएपछि जो कोही गरीब हुन्छ नै । यहाँको स्रोत साधनको सदुपयोग हुन नसक्दा आर्थिक उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । वार्षिक रुपमा छाकटार्ने चिन्ता नै अहिले आम नेपालीको अहम् सवाल बनेको छ । नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत तीब्र आर्थिक विकासमा लागिरहेका भए पनि नेपाल भने आर्थिक रुपमा कमजोर–कमजोर मात्रै बन्दै गएको छ ।
नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त
Tuesday, 07.22.2014, 09:52am
पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपालको भौगोलिक एकतामा भाषिक एकताको जलप लगाउने आदिकवि भानुभक्त आचार्य हुन् । तत्कालीन समाजलाई आधार मानेर उनले संस्कृत रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी जनजनको जिभ्रोमा पुर्याएपछि नेपाली भाषा–साहित्यले गति लिन थालेको हो । त्यसैले नेपाली भाषालाई जनजनमा फिजाउन र सबैको साझा भाषा बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भानुभक्त आचार्यलाई नेपालको भाषिक एकीकरणकर्ता मानिन्छ ।
बढ्दो आपराधिक प्रवृत्ति र राजनीति
Wednesday, 07.09.2014, 12:35pm
केही समयअघि प्रकाशित एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मानवीय स्वाभावमा पनि पर्ने र यसले मानिसलाई बढी हिंसात्मक बनाउने उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्ने तमाम क्षेत्रमध्ये मानवमा विकसित हिंसात्मक प्रवृत्तिको बढोत्तरीले मानव समाज हिंसाको दावानलमा परेको छ । कुनै एक घटना साम्य भयो भने त्यसको सहायक उपजका रुपमा त्यस्तो गतिविधि गर्नेहरू अनगिन्ती जन्मेका हुन्छन् ।
नेतृत्वको हानथापले नीति ओझेलमा ?
Wednesday, 07.02.2014, 11:55am
नेकपा एमालेभित्र आधा दशकयताको गुटबन्दीको स्वरुप बदलिएको छ । गुटबन्दीले एमालेलाई जति घाटा पुर्याए पनि नेताहरूको चेत खुलेको छैन । कहिले कुन त कहिले कुन गुट हावी भैरहँदा यसपटक सिर्जना भएको दुई गुट समान शक्ति देखाइरहेका छन् । एक पक्षले अर्को पक्षको पराजय निश्चित भएको दावी गरिरहे पनि असारको तेस्रो सातामा त त्यसको टुंगो लाग्ने नै छ । के त्यसपछि एमालेको गुटबन्दी सकिएला ?
व्यक्ति वा दल केन्द्रित सहमति अर्थहीन
Friday, 06.27.2014, 09:06am
मुलुक सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्ने भनिए पनि त्यो सहमति केवल कागजमै सीमित छ । अबको ७ महिनामा मुलुकले नयाँ संविधान पाउनुपर्छ । संविधानसभा कार्यसूचीले यसै भन्छ । तर संविधानका गम्भीर विषयहरूमा संविधानसभामा सहमति भैरहे पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास भएको छैन ।
हिरो हुने कि जीरो ?
Monday, 06.16.2014, 08:16pm
पाएको अवसरको सदुपयोग गरी आफूलाई सार्वजनिक रुपमा उत्कृष्ट बनाउने अभिलाषा राख्नु मानवीय स्वाभाव भए पनि नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा भने पाएको अवसरले आफूलाई मात्र पोस्ने र सार्वजनिक रुपमा बदनाम हुने चरित्र भएकाहरू प्रशस्तै छन् । यसै भएर यहाँ सानोतिनो काम गर्ने पनि जनताको नजरमा उत्कृष्ट ठहरिएका छन् ।
औंलो ठड्याउन मात्र सजिलो हुन्छ
Monday, 06.09.2014, 08:30pm
अरुलाई औंलो ठड्याउन जति सजिलो छ त्यसको पालना आफूले गर्ने बेलामा भने विगतमा उठेको ओंलो बिर्सने गर्दछन् नेपालका नेता तथा मन्त्रीहरूले । हिजो आफूले विरोध गरेको विषय आजा आफूले लागू गर्दा कत्ति पनि सरम नमान्ने प्रवृत्तिको बढोत्तरी छ । यो विषय हो रकमान्तरको र मुलुकको अर्थ राजनीतिमा यतिबेला रकमान्तरको ठूलो चर्चा छ । यसले एक सातासम्म संसद अबरुद्ध भयो ।
गणतन्त्रको खुट्टा किन गलेको ? - यादब देवकोटा
Monday, 06.02.2014, 03:20pm
संसारमै अत्यन्त दुर्लभ किसिमको परिवर्तन नेपालमा भएको हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट संविधानसभाले घोषणा गरेपछि राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजगद्दी त्यागेको अनुपम सन्दर्भ अहिले पनि झल्झली सम्झना हुन्छ । तर गणतन्त्रले बामे सर्न समेत सकेन । यसको एउटै कारण भनेको गणतान्त्रिक संविधान बन्न नसक्नु हो र त्यसका लागि राजनीतिको ठेकेदारी चलाउने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू प्रमुख जिम्मेवार छन् ।
शपथग्रहण कूटनीति : भारतको छवि सुध्रेला - यादब देवकोटा
Monday, 05.26.2014, 07:39pm
विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीनसंगको सम्बन्ध मोदीको प्रमुख प्राथमिकता हो । मुख्यमन्त्री छँदै चीन भ्रमण गरेर अपार सम्मान पाउनुभएका मोदीले चीनको विकास मोडल गुजरातमा अपनाउनुभएको बताइन्छ । मोदीकै पालामा चिनीया लगानी गुजरातमा भित्रियो । १९६२ को युद्धदेखि नै सीमा विवादमा रुल्मुलिएका तर व्यापारिक सम्बन्ध बढ्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक सम्बन्ध पनि सुधार हुनसके यसले एसियामा नयाँ गठबन्धनको निर्माण गर्ने र पश्चिमी जगतको प्रभावबाट मुक्त हुने आँकलन पनि गर्न थालिएको छ ।
शैक्षिक दूरावस्थाको कारण - यादब देवकोटा
Monday, 05.19.2014, 06:42pm
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भैरहेको छ । शिक्षाको लगानी विद्यालयदेखि विश्वविद्यायसम्मका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने मेसो मात्र बनिरहेको छ । यी शिक्षण संस्थाको उपलब्धि भनेको राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, राजनीतिको अखाडा बनाउने हो कि भन्ने आम बुझाई छ । ती निकायका गतिविधि पनि त्यस्तै छन् ।
भ्रष्टाचारमा संस्थागत संलग्नता - यादब देवकोटा
Monday, 05.12.2014, 04:21pm
जसले देश, समाजको अहित हुने काम गर्छ त्यो भ्रष्ट हो । आर्थिक लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार होइन । नियम विपरीत जाने जो कोही भ्रष्ट हुन्छन् तापनि अर्थसंग सम्बन्धित भ्रष्टाचार बढी चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । नेपालमा मात्र हैन विश्वभर नै यही मान्यता स्थापित छ । यसै मान्यतालाई हेर्दा नेपाल सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अंकित छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदनले नै यो कुरा खुलाएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको कामभन्दा गफ नै बढी
Monday, 05.12.2014, 04:14pm
काठमाडौं । मुलुकले व्यहोरिरहेका अनेक समस्याहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका जलविद्युत, सडक, सिंचाई, पुल लगायत राष्ट्रिय महत्व दिइएका आयोजनाहरूको गति काममाभन्दा गफमा मात्र बढी हुने गरेको पाइएको छ ।
नारा र व्यवहारको बेमेल - यादब देवकोटा
Monday, 05.05.2014, 04:20pm
सन् १८८६ मा अमेरिकामा भएको मजदूर आन्दोलनको सफलतासंगै मजदूरहरूको हक–हित र उनीहरूको सुरक्षा तथा काम, दाम र आरामको प्रत्याभूति कानुनी रुपमा भयो । त्यही बेलादेखि विश्वभर मजदूर दिवस मनाउन थालियो । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा मजदूर स्वतन्त्रताको यो दिन विशेष महत्वको रहने गर्दछ र मजदूर राजनीतिक आन्दोलनको एउटा कडी पनि बन्ने गरेको छ ।
धनी कतार : गरीबलाई कहर - यादब देवकोटा
Monday, 04.28.2014, 06:01pm
वैदेशिक रोजगारीले धानिएको अर्थतन्त्र र त्यो अर्थतन्त्र धान्न ४ लाखभन्दा बढी नेपाली युवालाई रोजगारी दिएको कतार यतिबेला रोजगारदाता नभै यातनादातामा परिणत हुँदैगएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । यसअघि कतारका लागि नेपाली राजदूतले नै कतार यातना गृह भएको टिप्पणी गरेर विवाद र बहस खडा गरिदिनुभएको थियो । त्यस्तै बेलायतको ‘द गार्जियन’ पत्रिकाले कतारमा रहेका विदेशी श्रमिकहरूको दयनीय अवस्था र उनीहरूमाथि मालिकबाट भैरहेको अमानवीय व्यवहार उजागर गरिदिएको थियो ।
» खै कहाँ छ परिवर्तन ? - यादब देवकोटा
» पुरानैबाट नयाँ सोचको अपेक्षा कति ? - यादब देवकोटा
» राज्य पुनःसंरचना लहडमा हैन - यादब देवकोटा
» धनी र गरीबको समावेशी मन्त्रिमण्डल - यादब देवकोटा
» मेटिएको छैन शंकाको रेखा - यादब देवकोटा
» दिवस–महोत्सव र उत्सवको उपलब्धि ? - यादब देवकोटा
» यसपटक पनि ‘ककस’को सकस - यादब देवकोटा
» संघर्ष र बलिदानीको स्मरण गरौं - यादब देवकोटा
» खै कसरी पत्याउने अब ? - यादब देवकोटा
» वैदेशिक रोजगारी र मनोरोग- यादब देवकोटा
» सन्दर्भ शहीद दिवस : सम्मानमा चुकेकै हो - यादब देवकोटा
» व्यवस्थापिकाको भूमिका र जनअपेक्षा -यादब देवकोटा
» विषयान्तरले जकडिएको राजनीति - यादब देवकोटा
» यसकारण मनाउने पृथ्वी जयन्ती - यादब देवकोटा
» नेपाल सिध्याउने खतरनाक खेल ? - यादब देवकोटा
» बीउ संरक्षण : सृष्टिको संरक्षण - वेदराज पन्त
» नेतालाई जिम्मेवार बनाउने हो भने - यादब देवकोटा
» राजनीति कसका लागि ? - यादब देवकोटा
» अहंकार कि मेलमिलाप ? - यादब देवकोटा
» सहमतिमा काम गर्ने जनादेश - यादब देवकोटा
Page 5/8: « 1234567 8 »